Ungayigqoka kanjani i-Smart - Izeluleko Zamadoda AseSitayeleni Amadoda aSitayela
Ukugqoka ngobuhle kuwuphawu lobunikazi, ukugqoka izingubo ezifanele ezisinika lowo mqondo wokugqoka kahle nokunambitha. Ezikhathini ezingaphezu kwesisodwa ngokuqinisekile ubufuna ukuthola lesi senzakalo sibe yinhle futhi ubungazi ukuthi uzozihlanganisa kanjani ezinye izingubo. Kungakho ezindabeni ezinjengalezi ungathola ezinye zezimpendulo zakho.
Kubantu besilisa abanesitayela esinakho imibono yalokhu kungabaza okuncane, ukuze wazi ukwehlukanisa umqondo wakho wokugqoka ezinye izingubo nabanye, ukwazi ukuthi unganakekela kanjani ukubukeka kwakho futhi ukwenze kucace ukuthi yini okufanele uyithenge nokuthi yini ongayibheja.
1 Ungathenga kanjani kahle?
2 Amathiphu ayisisekelo ngaleyo ngubo enhle
3 Khetha izingubo zakho ngobuhle
Ungathenga kanjani kahle?
Uma ukukhetha kwakho ukuba nezingubo ezinhle ekhabethe lakho, kufanele wazi ukuthi ukukhetha ingubo elungile akukhona ukuthenga ama-polos, amahembe nama-chinos ngobuningi. Ekamelweni akufanele lilahleke izingcezu ezibalulekile njengeMelika noma amasudi aphelele.
Ungakhohlwa ukuba nezingubo ezinhle akusho ukuthenga izimpahla ezintsha njalo, noma bathenga izingubo ezinophawu ezinophawu lwazo, noma abagqoka othayi kanjalo nje, noma batshale isudi nganoma iyiphi indlela.
Izinyathelo zokuqala zokugqoka ngobuhlakani ukwazi ukuthi uphila kanjani nokuthi hlobo luni lwezingubo ozidingayo kumcimbi ngamunye. Ukuhambahamba ngezinyawo akufani nokuya emcimbini obalulekile, sonke isikhathi nemizuzu yonke kuyabalwa nokukhetha ingubo elungile nayo.
Lapho uthenga kufanele ubheke izingubo ezihambisana nomzimba wakho nokunambitheka komuntu siqu. Kufanele wazi umzimba wakho kahle futhi wazi ngezindlela zakho ukuthi yiziphi izingubo ezikulingana. Siyazi ukuthi kunezingubo, ngenxa yesimo nokwakheka kwazo, ezingafani kumuntu omfushane noma omude noma onebala eliqinile noma elincanyana, yingakho kufanele wazi ukuthi ungakhetha kanjani ngokuzinikela.
Amathiphu ayisisekelo ngaleyo ngubo enhle
Akuyona isidina noma okudala ukukhetha izingubo eziyisisekelo. Akufani nokukhathala kepha kunalokho kuyisiqinisekiso esincane sokungenzi amaphutha nokuthi uzohlala unayo leyo ngubo ukufanisa enye.
Lapho ukhetha imibala ungahlala njalo ukubheja ngemibala yakudalas: blue, grey, beige, brown, omnyama nomhlophe. Uma kungenzeka, ukubheja ngemibala engagcini kakhulu, ngoba uzophumelela kakhulu ngemibala ethambile futhi esangulukile.
Njalo thenga izingubo ngosayizi wakho. Kuyiphutha ukubona ukuthi ingubo ibanzi noma incane kakhulu. Uma kungenzeka ungabi nayo inketho yokuthenga usayizi wakho futhi mkhulu kakhulu, qaphela ukuthi ungaba nenketho yokwenza amalungiselelo amancane ngosizo lomthungi wezingubo.
Ukuthenga izingubo ezisemfashinini kuyindlela enhle, kodwa bona ukuthi kungabukeka kukuhle kuwe, ngoba wonke umuntu akanayo ingubo eyodwa noma enye. Kufanele ihambisane nobuntu bakho nezinto ozithandayo, ngoba uma kungaphandle kwethoni kungangakhululeki kuwe.
Khetha izingubo zakho ngobuhle
Kunezingubo eziyisisekelo ezingenakushoda ekhabethe lakho, njengoba sishilo, kubalulekile ukukhetha izingubo zakudala ezinemibala ethambile engaphumi ngesitayela:
Ungayeki ukuthenga amahembe amhlophe Zisebenza njalo kahle kakhulu ekugqokeni okungajwayelekile nenhle. Uma ukhetha ukukhetha umbala onombala othambile, ngaphandle komdwebo noma iphethini. Okugqamile ngukuthi ihembe kufanele lihlale li-ayinwe kahle, kuyindlela yobuhle.
Uma bekwazi ukuhamba njalo kufakwe ngaphakathi amabhulukwe nemikhono emide. Uma ukhetha ihembe okufanele ligqokwe ngaphandle, qiniseka ukuthi liqinile futhi alimbozi ingaphambili noma emuva kwamaphakethe.
Amabhulukwe eChino asetshenziswa kakhulu ngoba zihlangana ngendlela enhle nenhle. Ziwuphawu lokugqoka kahle nangobukhazikhazi, zinemisebenzi ehlukahlukene kakhulu futhi zibukeka zizinhle ngamahembe wepolo namashirt afakwe ngaphakathi. Imibala ongabheja kuyo yimibala efudumele, noma ungeke uyeke ukuba nombala oluhlaza okwesibhakabhaka.
Uma ukhetha ukugqoka amajini, kufanele sikutshele ukuthi nazo zinhle, uma kungenzeka zincane futhi zinombala owodwa oqinile futhi omnyama. AmaJean adabukile, agugile noma anama-rivet amaningi noma imihlobiso ayihle.
Amajakhethi okugqoka ayini banikeza lokho kuthinta okuphambili kobuhle. Ijakhethi yesudi iyona ebhejwa kakhulu futhi imibala ekhethwe kakhulu isukela kokumnyama njengombala omnyama, oluhlaza okwesibhakabhaka noma o-navy blue.
Uhlobo lwe-blazer banomculo wesimanjemanje futhi wezemidlalo, kepha zisesitayeleni futhi zihamba kahle ngamajini namabhulukwe anezinwele. Indwangu nokuqedwa kokugcina kwalolu hlobo lwejakhethi kuyisikhathi sobuhle obukhulu obunikeza lezi zingubo. Ngaso sonke isikhathi kufanele ubheje lezo zindwangu ezingashwabani kalula futhi njalo ubukeka ungenaphutha.
Ukubheja ezicathulweni zokugqoka kuyindlela engcono kakhulu. Ngabe ama-loafers akudala, izicucu noma izicathulo ezinezikhonkwane futhi uma zinsundu noma nsundu zizohlala ziyindlela engcono kakhulu. Akunconyelwa ukugqoka amateki, yize sekuvele kukhona ezinye izinhlobo namamodeli emakethe okunikeza lokho kuthinta kobuhle.
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » Ukunakekelwa komuntu siqu » Ungagqoka kanjani kahle